M/weyne Shariif Xasan oo bilaabay ololihiisa doorashada xilka M/weynaha koonfur Galbeed… – Hagaag.com
M/weyne Shariif Xasan oo bilaabay ololihiisa doorashada xilka M/weynaha koonfur Galbeed…
Posted on 1 Agoosto 2018 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka bilaabay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo olole uu ku doonayo in mar kale dib loo doorto xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed.
Shariif Xasan oo muddo xileedkiisa xilka Madaxweynaha Koonfur Galbeed uu gabaabsi yahay ayaa wajahaya loolan uu xilligan kala kulmayo siyaasiyiin dhowr ah oo kula tartamaya xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed.
Doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa dhici doonta bisha November ee dhamaadka sanadkan, waxaana durba soo baxaya Musharaxiin badan oo u hanqal taagaya xilkaas.
Shariif Xasan ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay kulamo la qaadanayay Xildhibaanada ka soo jeeda Koofur Galbeed, isagoo ka dhaadhicinayay sidii ay ku taageeri lahaayeen in dib mar kale loo soo doorto.
Waxaa uu sheegay inuu soo dhoweynayo cid walba oo kula tartameysa kursiga, balse waxaa uu ka digay siyaasiyiin uu sheegay inay carqalad ku sameeyaan doorashada soo socota.
“Horey ayaan u sheegay inaan musharax ahay, hadii la i doorto waan shaqeynaa, hadii qof kale la doorto waan la shaqeynaa, laakiin waxaan rabnaa doorashada inay ku dhacdo sida saxda ah, ma rabno rabshado in la kiciyo, waan ka digeynaa, cid walba oo tartameysa waan soo dhaweyneynaa”ayuu yiri Shariif Xasan.
Shariif Xasan oo ah Madaxweynaha kaliya ee maamul goboleedyada oo ay soo doorteen Ergo, isla markaana laheyn Madaxweyne kuxigeen ayaa lagu dhaliilaa in maamulkiisa uu fadhiid yahay, isla markaana waqtigiisa ugu badan safaro ku bixiyay iyo Muqdisho oo uu ka dhigtay meel xarun u ah.
Doorashada soo socota ee November dhici doonta ayaa la filayaa inay ka soo muuqdaan siyaasiyiin badan oo horay Shariifka xafiiltan ugala dhaxeeyay, iyadoo durba la hadal haayo xubno deegaanka taageero ku leh.